Nin Soomaali oo saddex Soomaali ah ku dilay Koonfur Adr – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nin Soomaali oo saddex Soomaali ah ku dilay Koonfur Adr
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in xalay magaalada Cape Town uu nin Soomaaliya ku dilay saddex ruux oo Soomaali ah.
Ninkaan Soomaaliga ah ayaa watay bistoolad, ayaa weerar ku qaaday dad ku sugnaa baar ku yaalla deegaanka Mitchell Plain ee magaalada Cape Town.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ninka dilka geystay uu dadkaas ugu tegay goobahooda ganacsi.
Boqolaal Soomaali ah ayaa isugu soo baxay oobta uu falka ka dhacay waxaana ay aad uga xumaadeen dhacdada naxdinta leh ee ka dhex dhacday Soomaalida ku nool deegaankaasi. iyagoo qaarkood ilmeynayeen maadaama muwaadiniinta geeriyooday ay ahaayeen rag aad looga qadariyo deegaankaasi oo ay Soomaalida ku nooshahay.
Odoyaal iyo culimada Soomaalida oo goobta kula hadlay dadkii isugu soo baxay ayaa xusay in dhacdadani ay tahay musiibo ku dhacday Soomaalida, waxaana ay ugu baaqeen in xaalada la dajiyo, islamarkaana bulshada aan loo kala qaadin warar abuuri kara colaad dhax marta dad walaalo ah.
Muwaadiinta Soomaalida ee ku dhintay toogashada ayaa lagu kala magacaabi jiray C/wahaab Nusliiro, Cabdi madoobe iyo Maxamed Xasan Maxamed, kuwaasoo la filayaa in maanta salaada duhur kadib lagu aaso qabuuraha Muslimiinta magaalada Cape Town.